Ungalugcina kanjani uhlelo lwethu lwedatha kuselula ye-Android | Izindaba zamagajethi
Ukwenza kanjani ukusetshenziswa kwedatha kuselula yethu ye-Android
Uma sithole iselula enesistimu yokusebenza ye-Android, izophinde ixhunywe kulayini wocingo; kuya ngo-opharetha osinikeze le sevisi, kuzoba njalo izindleko esizodingeka sizikhokhe inyanga nenyanga.
Manje, uma sisanda kuthola umakhalekhukhwini wethu, ngokuqinisekile sizoqala ukuphequlula umsebenzi ngamunye, i-Google Play Isitolo ukulanda nokufaka izinhlelo ze-Android futhi, bukela amavidiyo we-YouTube futhi ulalele umculo osakazwayo, izinto ezingahle zidle inani elikhulu lemininingwane enikezwe opharetha ngocingo. Uma singanaki nganoma yisiphi isikhathi futhi siqala ukwenza konke ngocingo lwethu oluphathekayo, nakanjani sizothola isikweletu esikhulu ngokweqile ekupheleni kwenyanga. Ngalesi sizathu, manje sizokhuluma ngamathiphu nezeluleko ezimbalwa ukonga ukusetshenziswa kwale datha enesivumelwano.
1 Xhuma idivayisi yethu ye-Android ku-Wi-Fi
2 Khomba izinhlelo zokusebenza ezidla imininingwane yethu
3 Landa izinhlelo zokusebenza ze-Android nge-Wi-Fi kuphela
4 Jabulela izinsizakalo zokusakaza efonini yethu ephathekayo
5 Khubaza isibuyekezo sangemuva
Xhuma idivayisi yethu ye-Android ku-Wi-Fi
Imfihlo evulekile iyilokhu, okungukuthi, uma ngesikhathi esithile sithola ifoni ephathekayo kunoma iyiphi indawo lapho siyazi ukuthi kukhona ukuxhumana kwamahhala kwe-Wi-Fi, kufanele siyisebenzise ukuqala ukuphequlula izinhlelo zokusebenza noma i-Intanethi ngakho-ke singasebenzisi idatha enesivumelwano. Ngaphezu kwalokhu, ezindaweni ezehlukene zokusebenza (futhi njengamanje, ezikhungweni zomphakathi) ngokuvamile kunenombolo enkulu yokuxhumana kwe-Wi-Fi esingakwazi ukukufinyelela. Uma kusebenza kwethu, kuphela kuzofanele sibeke imininingwane efanele ukufinyelela ukuxhuma kunethiwekhi engenantambo.
Khomba izinhlelo zokusebenza ezidla imininingwane yethu
Uma umakhalekhukhwini wethu unohlelo lokusebenza lwe-Android 4.3 kuya phambili nendawo lapho sikhona akukho ukuxhumana kwe-Wi-Fi kufinyeleleka ngokukhululeka, lapho-ke singathola iqhinga elincane lokuqhubeka nokwenza ngcono ukusetshenziswa kwedatha enesivumelwano.
Kuzofanele siye ekucushweni (noma ukulungiswa) futhi kamuva, ukhethe inketho ethi "Ukusetshenziswa Kwemininingwane" (noma ama-Data Networks); lapha kufanele siye kuphela ezansi kwesikrini ukuphenya ukuthi yiziphi izinhlelo zokusebenza ezifakiwe ezithatha inani elikhulu kakhulu ledatha esigungwini.
Landa izinhlelo zokusebenza ze-Android nge-Wi-Fi kuphela
Ukubuyela eselulekweni esisinike sona phambilini, ukusebenzisa inethiwekhi engenantambo ye-Wi-Fi kuyisixazululo esisebenzayo kunazo zonke ongasisebenzisa lapho ugcina idatha; isibonelo, uma singabantu abathanda landa izinhlelo zokusebenza kwiselula ye-Android, Lo msebenzi kufanele siwenze kuphela uma sixhunywe kule nethiwekhi engenantambo. Uma ufaka esitolo bese ukhetha uhlelo ozolulanda, ithuluzi (ngeshwa, hhayi bonke) lingafinyelela isikisela umsebenzisi ukuthi asebenzise kuphela inethiwekhi ye-Wi-Fi ukuyilanda, into okufanele siyamukele ngaphandle kokucabanga kabili.
Jabulela izinsizakalo zokusakaza efonini yethu ephathekayo
Ukujabulela izinhlobo ezahlukahlukene zokuqukethwe okusakazwayo kungaba ngesinye sezizathu ezinkulu uma kukhulunywa ngakho phenya ukuthi ngubani odle inani elikhulu kakhulu lemininingwane enenkontileka; Ngalesi sizathu, kufanele sibuyekeze lokho okwenziwa yiSpotify, Pandora, NetFlix noma enye insizakalo esinikeza ithuba lokubuka amavidiyo noma ukulalela umculo ovela kuwebhu okwenzayo njengamanje.
Isiphakamiso ebesilokhu sisenza kwasekuqaleni siyasebenza futhi ngalesi sikhathi, okungukuthi, kufanele sizame jabulela lezi zinsizakalo zokusakaza kuphela lapho sixhunywe kwinethiwekhi engenantambo ye-Wi-Fi. Izinhlelo ezimbalwa zikunikeza ithuba lokuzisebenzisa ungaxhunyiwe ku-inthanethi, inzuzo enkulu kakhulu lapho ulalele umculo noma ubuka amavidiyo ovame ukukunikezwa yizinhlobo ze-YouTube ne-Spotify kulezi zingcingo.
Khubaza isibuyekezo sangemuva
Izikhathi eziningi asisiboni lesi simo, kepha uma sinezinye izinhlelo zokusebenza ezifakwe kuselula, okufanayo izolungiswa ukuze ibuyekezwe ngokuzenzakalela lapho kukhona inguqulo entsha yazo, okuthile okungamela ukusetshenziswa kwedatha enesivumelwano.
Ngalesi sizathu, kuyadingeka ukufaka izilungiselelo zesitolo bese ubuyekeza indawo yezinhlelo zethu zokusebenza ezifakiwe. Uma sesifikile kufanele khubaza le nketho kusuka ku- «izibuyekezo ezizenzakalelayo».
Ekugcineni, isilinganiso esiqinile sokusetshenziswa sitholakala kufayela le- "Incazelo Yomkhawulo Wedatha Yeselula"; Le nketho sizoyithola phezulu kwimenyu ngaphansi kwe- "Ukusetshenziswa kwedatha", kuphela lapho kufanele silungise lo mkhawulo wokusetshenziswa kwedatha ngokuslayida umugqa obomvu kusuka phezulu kuye phansi.
Ngokulandela amanye amathiphu esiwanikeze wona, ngokuqinisekile uzoba nesikweletu sokusetshenziswa esinobungane ekupheleni kwenyanga.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » Ukwenza kanjani ukusetshenziswa kwedatha kuselula yethu ye-Android
Idlalwa kanjani Amaslayidi Kancane noma Ngokushesha ku-Windows